वास प्लानको सुरुको ड्राफ्ट सिस्टम बाटै बन्छ : प्रमुख, ओझा – WASHKhabar
५ माघ २०७७, सोमबार ११:०८ 745 पटक हेरिएको
एनवास प्रणालीबाट वास प्लान बनाउँदा समुदायको खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइ प्रणाली, स्कुल, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक स्थानको सरसफाइको वर्तमान अवस्था पत्ता लाग्छ । अहिलेको अवस्थाबाट सेवाको गुणस्तर कहाँ पुर्‍याउनु पर्ने हो ? कहाँ कस्तो सुविधां पुगेको छैन ? यसका लागि स्थानीय सरकारलाई कति पैसा आवश्यक पर्छ भन्ने मोटामोटी स्टिमेट पनि त्यसैले दिन्छ । वास प्लानको एउटा मस्यौदा सिस्टमले नै स्वचालित तरिकाले तयार पार्छ ।
जस्तो सन् २०३० को दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कहाँ कहाँ के गर्नुपर्छ ? त्यो लक्ष्य हासिल गर्न कति पैसा चाहिन्छ ? त्यो सबै सिस्टमले नै निकाल्छ । त्यही सिस्टम प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ । आवश्यक लगानी मध्ये कहाँबाट कति जुटाउने हो त्यो पनि सिस्टमबाटै थाहा हुन्छ । स्थानीय तहले निर्माण गरेको वास प्लान केन्द्रसँग पनि जोडिने भएकाले यसले राष्ट्रिय स्तरको वास प्लान बनाउन पनि सजिलो हुन्छ ।
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थाप विभाग, राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थापन परियोजना एवं संस्थागत सहयोग तथा सेवा परामर्श इकाई प्रमुख डा. रजित ओझासँग वास खबरले गरेको कुराकानीमा आधारित ।